Jwxo-shiil oo Dilkii Dr. Dolal ka Dib ay Cirka iyo Dhulkuba ku Yaraadeen – Rasaasa News
Jwxo-shiil oo Dilkii Dr. Dolal ka Dib ay Cirka iyo Dhulkuba ku Yaraadeen
Oct 12, 2009 Jwxo-shiil, Jwxo-shiilo, ONLF
Sharka kii ka abuurmay, Shaydaan aan la aqoon, aakharo aan shaati u oolin, ummada kii kala shiilay, shibanaa la yidhaa, oo dibnuhu shigshigaa, shan hal oo meeshan ku taal iyo shaarubaduu marmaraa, shaydaan weeye abees ah oo Ogadeen shansha gooyey oo Jwxo-shiil kugu sheegnay shar xun baad ku dambayne.
Wararka naga soo gaadhay Swisserland ayaa sheegay in Jwxo-shiil, oo uu garbaha hayo wiil uu adeer u yahay, yaa allaahu iyo yaa umati lagu geeyey dalka Swisserland, halkaas oo ay ugu yimaadeen kooxdiisii [Brigato Rose] ee Maafiyada Talyaaniga oo ay dadweynaha Somalida Ogadeeniya si aad ah ugu yaqaanaan Kooxda Jwxo-shiil, ka dib kolkii la waayey meel la isku aamino oo la isugu yimaado, ayey dantu ku khasabtay in ay Tuulo cidlo ah isugu yimaadaan si qarsoon.
Kooxda Jwxo-shiilo [qabiil ku Jabhad], ayaa waxay aad uga aamin baxsan yihiin ruux kasta oo ka soo jeeda dhulka Somalida Ogadeeniya, waxayana aaminsan yihiin in ruuxii arkaaba uu dili Jwxo-shiil [qaydhiin cune calooshiisuu ka yuclul qabaa], waayo waxay ogg yihiin in aan looga hadhaynin dilkii Dr. Dolal. Jwxo-shiilo ama beesha reer Haaruun, ayaa waxay ku soo kiraysteen qaaraankii ugu dambeeyey ee ay dadka ka aruursadeen saddex nin oo cadaan ah [Security], waxaa kale oo iyana gaadh ka sii qabtay 5 wiil oo uu adeer ugu quman yahay Jwxo-shiil.
Jwxo-shiil, oo ay aad u waxyeeleeyeen xanuunkii dhiig karka ahaa ee ku dhacay daraadood ayuuna kari karin wax hadal ah, waxaana u xidhan baa la yidhi bahalka caruurta loo xidho ee kaadida celiya [pumber]. Waxaa kooxdiisa ugu horeysay oo ay is arkeen kolkii shirka la keenay isaga oo jaraynaya oo aan kor kuu eegi karin dadka hortiisa fadhiyey, waxaana amakaag iyo dhawris ku noqotay laba sac oo hareeraha ka fadhiistay kolkii uu hadli kariwaayey.
Ilaahayow na dil oo hana doorin, dadweynaha Somalida Ogadeeniya waxaa markhaati ugu filan aragtida sawirka ku dhagan bogga hore ee uu noo soo diray wariyaheena jooga Swisserland. Sawirka ayaa muujinaya sida ay uga naxsan yihiin Maadeey iyo Macalin Diirane oo iyagu sugaya sidii ay hore u sheegeen dhimashada Jwxo-shiil, si marka uu dhinto ay jagada uga dhaxlaan.
Waxaa si xoog leh ugu gadaaman Jwxo-shiilo [beeshar reer haaruun], oo aan iyagu wax dan iyo aabo ah ka lahayn halganka ummada iyo waliba dilka gardarada ah ee uu u gaystay Naftood hurayaalka qaaliga ah, gaar ahaana ninkii ay dalka Ingriiska wada deganaayeen Dr. Dolal. Reer haaruun waxay ka doorteen in ay garbaxaan in ay gardaroodaan oo ay ku walicyaan Jwxo-shiil, dadkii uu dhagarta ka galay waxaase loo joogaa ninka ay waydu ku dambayso.
Midda kale dadweynaha Somalida Ogadeeniya, marka laga reebo caruurta iyo wax ma garatada, waxay ogg yihiin heerka ay marayso xaalada ururka ONLF oo gabogabo ah, ninka sidaas ka dhigayna waad wada ogtihiin, dalalka reer galbeedka in Jwxo-shiil isaga oo kici la,a uu yidhaah reer haaruunow ii sacab tuma waxaan ahay ONLF, waa ogadeen iyo xumaantiis, wixii ka dambeeya ayeynuse arkidoonaa.
Kulanka Kooxda xaaraanta halganka ee Jwxo-shiil, waxaa ka soo xaadiray; Roda Af Jano iyo xaaskeeda, Maadey iyo Macalin Diirane, Dambiile Ina Cabdulahi Gamadiid, qalbi caruur Jaangooye, kuwii Jwxo-shiil qabiilka ugu matalayey jiray [human rights] iyo 50 ruux oo reer Haaruun ah oo laga soo uruuriyey dalalka Yurub.
Afar Reer Haruun ah iyo Ina Maryama Agan oo Is Arkaya